Mould bhokisi vatengesi uye fekitori - China Mould bhokisi vagadziri
Product Detail: Kuumba matanda chishandiso chinoshandiswa mune zvakawanikwa. Kana muchina wekuumba uchinge uchishanda, iyo Mabhodhoro ekuumba anochengeta jecha kuti riumbe chimiro. Mushure mekunge zvinhu zvakaita sesimbi yakanyungudutswa zvadururirwa mujecha rakaumbwa iro raive rakabatwa nekuumba Mabhasikiti, iyo yakanyungudutswa zvinhu zvinozomarara uye kuumba kukanda kwaunoda. Kuumba mabhodhoro kazhinji kunogadzirwa kubva kune yakakoswa simbi uye wozogadzirwa kuti uwane zvirevo. Transaction process 1.Sample kana Drawing nemutengi 2.Tool ...
Jecha Kukanda Molding Line Yakashandiswa Kukanda Molding Bhokisi reFryry
Kavha & Dhirivhari Yekutakura Yekupakata: Yakapfeka kurongedza kana Wooden bhokisi Dhirivhari Dudziro: mukati memazuva makumi matatu uchinge wagamuchira dhipoziti Chigadzirwa Mafambiro 1. Tarisa pane yakakura / yepakati saizi castings, pamwe ne diki saizi idzo. 2.Gray simbi / Ductile simbi Kudzingwa pamwe Resin-Waakaita jecha Kudzingwa muitiro. Yedu Services Transaction Maitiro 1.Muenzaniso kana Dhirowa nemutengi 2.Tooling chikumbiro & Kukurukurirana 3.3D Tooling Dhizaini 4.Tooling kugadzirwa 5.Rough zvikamu mugadziri 6.CNC machine 7.Fitting & Fini ...
Jecha Kukanda Molding Line Yakashandiswa Kukanda Flask yeFryry
Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Chinwiwa Mould Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Sandbox, Punch Out Muchina, Richigadzirisa vachikanda chinu,